Lawmh Um Tuk, CDF Pawl Nih Ralhrang Tam Pi An Thah Than Hna - TIMES OF CHIN NEWS
Lawmh Um Tuk, CDF Pawl Nih Ralhrang Tam Pi An Thah Than Hna
CDF-Kanpetlet nih SAC ralkapatlawm bik 10 kahthah
CDF-Kanpetlet le SAC ralkap cu September 14, 10:00 AM hrawng, Saw le Kanpetlet kar ah an i kap i SAC ralkapatlawm bik 10 an thi i tamlak hliamh an si, tiah cathanh an chuah.
“CDF-Kanpetlet lei in aa hliam mi kan um lo. Kahdohnak pehtlai inafah than khawh caah mizapi nih Saw le Kanpetlet kar khualtlawn le umkal i ralring u,” tiah cathanh an chuah.
တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် ယနေ့ ၁၄.၉.၂၀၂၁ အဂ်ါနေ့ နံနက် (၁၀း၀၀) ဝန်းကျင်မှစ၍ ကန်ပက်လက် ဆောအကြား CDF-Kanpetlet နှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်သားများ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စခဘက်မှ (၁၀)ကောင်ထက်မနည်း ကျရှုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရရှိသည်။
စခဘက်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်
ခဲ့သည်။မိမိတို့ CDF-Kanpetlet ဘက်မှ အထိအခိုက်မရှိပါ။ တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆော ကန်ပက်လက်အကြား သွားလာခြင်းမပြုရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ Credit: The Hakha Time